/Blog/garari/Zvese nezve Oxandrolone (Anavar), unofanirwa kuziva
Posted on 10 / 26 / 2019 by 阿斯劳 akanyora garari.
Chii chinonzi Oxandrolone (Anavar)?
Oxandrolone (53-39-4), ine Anavar poda sezita rayo remhando, ndeyeinogadzira androgen uye anabolic steroid (AAS) zvinodhaka inozivikanwa kwazvo nekuda kwesimba rayo uye simba-rinowedzera masimba. Iyo iri pakati peinonyanyozivikanwa uye inoshandiswa pamuromo anabolic steroid. Anabolic zvinoreva kuti inowedzera mapuroteni esero, nekudaro zvichitungamira nekuwedzera kwetsandanyama uye mapfupa akasimba.
Kuve testosterone analogue (kuumbwa kwayo kwakafanana neiyo testosterone), Anavar anoita mamwe mapuroteni enyukireya uye anosunga kwavari sezvinoita testosterone. Nekuda kweizvozvo, inogona kubatsira mu testosterone kutsiva kurapwa.
Oxandrolone (Anavar) upfu (53-39-4) yakachengeteka kuti ishandiswe nevarume nevakadzi kana muyero wakakodzera wakanamatwa. Zvirinani zvakadaro, mhedzisiro yayo inowanzo kuve yakapfava. Saka nekudaro, ndeimwe yemhinduro-dzevanhu vanorwara neHIV-yekuparadza syndrome kana yechirume hypogonadism sezvo ichivandudza kuchengetedzwa kwenitrogen pamwe nemafuta-asina mhasuru.
Kana iwe uchitsvaga iyo yakanyorovera asi yakatsanya anabolic steroid yemurume kana mukadzi, haufanire kuenda zvakaipa neOxandrolone poda (53-39-4. Vamwe vanhu, kunyangwe muAnavar reddit wongororo, vanoidana "Musikana Steroid" nekuti iri pakati peiyo shoma steroid inoenda zvakanaka nehuwandu hwevakadzi.
MUTSVENE ndiye nyanzvi yekugadzira anavar powder (oxandrolone).
Oxandrolone (Anavar) yakatsanangurwa kekutanga mugore ra1964 paSearle Laboratories (parizvino iri chikamu chePfizer). Iyo kambani inogadzirawo mimwe mishonga inozivikanwa seCelebrex, NutraSweet uye Ambien. Icho chigadzirwa chekushandira pamwe kwaRaphael Pappo naChristopher J. Jung.
Nyanzvi dzekutsvagurudza dzakashamiswa neakanyanya kusimba uyerogenic mhedzisiro yeOxandrolone zvine chekuita nemushonga wevanabolic mhedzisiro. Ivo gare gare, muna 1964, vakaunza mushonga uyu se mishonga yemishonga yekusimudzira musumbu regrowth mune vanhu vane uremu kurema uremu pamwe nehutachiwona hweHIV / AIDS.
Nehurombo, mushonga wacho wakashungurudzwa kusvika pamwero mukuru nevanovaka ma bodybuilders, uye izvi zvakakurudzira pachena kushomeka. Nekuda kweizvozvo, Searle Laboratories yakaibvisa mu1989.
Mushure memakore akati wandei, Bio-Technology General Corporation (Bio-Technology General Corporation) yakatora kuongororwa nekusimudzira kwemushonga. Miedzo yekiriniki yakaitwa nekambani pamushonga mu1995 inotungamira kuburitswa kwechipiri, asi zvadaro pasi peOxandrin (zita rechiratidzo).
Pakati peiyo nguva, iyo anabolic steroid mushonga yakatengeswa pasi pezita rezita rezita, kusanganisira Genesis Oxandrolone uye Oxandrin, pasi rese. Zvisinei, yakazobatanidzwa kune zita rayo reAmerica rekare, Anavar.
Nekufamba kwenguva, Kudya neDrug Administration (FDA) yakabvumidza Oxandrolone yenzvimbo yenherera yekurapa senzira yekurapa Turner Syndrome, hutachiona hunokonzerwa neHIV-pamwe nekudzikira uremu nekuda kweHIV.
Oxandrolone kushandiswa kwese mumusika uye pasi repasi pamusika
Oxandrolone inodhura kwazvo kuburitsa uye kune yakasimba mirairo maererano nekugadzira kwayo, kutengesa uye kushandisa. Kuti udzivise zvipingaidzo izvi uye nekuchengetedza pamutengo, kwave paine vatengesi vazhinji vakatora bhizinesi rekugadzira nekutengesa mushonga wepasi pevhu.
Nehurombo, iyo yekutengesa yakasviba 'Oxandrolone' inogadzirwa mumabhokisi asina kuchena ebasamo umo zvinodiwa zvinodiwa zvisingawanzo kutevedzerwa. Nekuda kweizvozvo, zvakanyanya kuomarara kuti vashandisi vawane zviri pamutemo Anavar kubva kumusika mutema kana pasi pevhu murabhoritari. Kunze kwekusa kupa mhedzisiro yaunoda, mushonga wakadai ungatungamira mukukuvadza.
Rimwe dambudziko neAnavar rinotengeswa mumusika wepasi pevhu nderekuti rinogona kushungurudzwa kunyange nevadiki nekuti hapana mitemo inorambidza kutora kwavo uye kushandiswa.
Kana iwe uchida kuwana yechokwadi uye yakachengeteka Anavar, simbisa kuti unoita yako Oxandrolone poda mutenge kubva kumutengesi ane mvumo uye akatenderwa zviri pamutemo. Kunyangwe iyo Oxandrolone ichitenga kubva kune vatengesi vakadaro ingangove yakanaka kana ichienzaniswa neyevatema-musika iwo, ivo vanokoshesa.
Iwe unovimbiswa kuti iwe uri kuwana chaiyo yakasviba yeupfu kana chigadzirwa chekupedzisira nekuti vazhinji vevatengesi vakadaro havaise panjodzi kurasikirwa nerezinesi yavo nekuda kwekutengesa zvisiri zvechokwadi chigadzirwa. AASraw iri pakati pevatengesi vechokwadi cheOxandrolone chaiyo.
Iyo oxandrolone mutengo inowanzo kwirira. Nekudaro, kana iwe ukasangana nemutengesi anotengesa mushonga uyu nemutengo we 'zvakadzama', tsvaga kuti uone kana mutengesi ane rezinesi uye achishanda zviri pamutemo kuti ave nechokwadi chekuti haupedzisi nechibvumirano.
Anavar / Oxandrolone chinhu chinodhura kugadzira, uye zvinowanzo kurayirwa kuti uzvitenge kubva kune chero mutengesi anozvipa pamitengo ye'dzikisira '. Unogona kutarisa Anavar ongorora kuti uone kana mutengesi achishanda mukati merimiro yepamutemo uye kana zvigadzirwa zvavo zviri zvechokwadi. Ongororo yeAnavar zvakare inokupa iwe mazano nezve iyo nzvimbo dzakanakisisa yekutenga mushonga.
Oxandrolone mutemo mamiriro muUS nedzimwe nyika
MuUS, iyo Controlled Substance Act inoronga Oxandrolone / Anavar, pakati pezvimwe zvakawanda uyerogen uye anabolic steroid seShedhiyo III inodzorwa chinhu. Izvi zvinoreva kuti munhu anofanirwa kuzviwana kuburikidza nachiremba ane marezinesi uye chemishonga.
Zvirango zviri pamutemo zvinopihwa pamunhu ane piritsi risiri pamutemo mugwaro III, kusanganisira Anabolic steroids powder yeOxandrolone kana yekupedzisira Anavar, zvinoenderana nemitemo chaiyo yakakodzera inotonga nyika.
Kazhinji, vatadzi vanoiswa mumashure vobvisirwa faindi. Zvinoenderana neDare Rinodzora Substance Act, dzimwe mhosva dzakanangana neOxandrolone dzinosanganisira kuba mari yekuwanikwa uye kuve nemushonga pasina mutemo unoshanda.
MuUK, Oxandrolone ndechimwe chezvinhu zvinodzorwa zvakakamurwa muChirongwa IV; ese anabolic steroid ndeyechikamu ichi.
MuCanada, mitemo yenyika maererano neOxandrolone yakanga yakafanana neayo muUK kusvikira 1996 pakagadziriswa mutemo, kunze kwedanho IV. Nekuda kweizvozvo, hapana gwara rakajeka pane remamendi rigadziriso kune vanhu vanga vaine chigadzirwa, avo vanazvo pariri uye avo vanofarira kuve naro.
Nekudaro, iyo yeCanada steroid mutemo ine bakoat inotaura kuti munhu ari mukati menyika haakwanise kutenga mushonga kunze kwekunge vatsanangura chikonzero nei vachida kuutenga. Zvichienderana nechikonzero chakapihwa, mutengesi anogona kugamuchira kana kuramba chikumbiro chekutenga. Kuedza kutenga steroid kunofanirwa kuteverwa neinenge mazuva makumi matatu isati yaitwa imwe.
The vagueness in Mitemo yeCanada yezvinodhaka, kunyanya kusvika kuOxandrolone, inoratidzika seyakagadzika kuita kuti vakuru vayo vatore mahara mumatare umo vanovaka muviri vanowanikwa vachishandisa iyo steroid yezvinofadza. Nekudaro, nguva zhinji, mhosva yekutanga-yakanangana neAnavar inokwevera faindi isingapfuure $ 2000 uye nguva yekuvasungwa inosvika kumwedzi ye18.
Iyo Oxandrolone raw material mamiriro muChina
Iko kugadzirwa kwemasoftids akadai seOxandrolone kunotongwa zvakanyanya munyika dzakawanda uye izvi zvinodzikamisa huwandu hwevagadziri vayo.
Nekudaro, vatengesi vevatengesi vatengesi munyika dzakasiyana siyana, kusanganisira iyo US inoshandisa mukana uyu kupinza zviri pamutemo kuunzira Oxandrolone mbichana zvigadzirwa uye kugadzira nekutengesa iwo mushonga pasina kuziva kwemasangano anoshanda ehurumende.
China ine makumi gumi evatengesi vanotenderwa vanotengesa hupfu hweOxandrolone. Izvi zvinoita kuti chigadzirwa chiwanike munyika kwete kune vatengi vangade kuitenga kuti iwedzere kugadziriswa. Nehurombo, mimwe midziyo yakasviba yeOxandrolone poda kubva kuChina inoshatiswa, zvichitungamira mukugadzirwa uye kutengeswa kwechibhendi Oxandrolone pasi rese.
Chii chaungatarisira neOxandrolone?
Iyo yakawanda yeOxandrolone vashandisi vanotora iyo steroid kuti iwane uremu kuburikidza nekukura kwemasuru. Izvi zvinonyanya kuvandudza hutano hwevanhu vari kuwana huremu hwakanyanya nekuda kwehutachiona kana kuvhiyiwa.
Zvinoshamisa kuti, uremu hunowanikwa kubva mukushandiswa kweAnavar ndeyekusindimara kwemasisuru nekuti iyo mahormoni inopihwa nemushonga haichaputi. Saka nekudaro, muviri wako hauchazowona kuchengetwa kwemvura zvakawandisa semhedzisiro yekushandisa iyo steroid. Chimwe chinotyisa pamusoro pemhedzisiro yemushonga uyu ndechekuti zviri nyore kuti mushandisi abatisise pakakora uremu.
Kunyangwe mushonga wacho ukasazopa mibairo yakaringana neiyo inokonzerwa nekushandiswa kwevamwe vanozivikanwa mamiririri seTestosterone neAnadrol, ichave yakakodzera kune vanhu vari kutsvaga kungowana mwero. Ndokusaka inonyanya kufarirwa nevakadzi nekuti vazhinji vacho vanongofarira kungowedzera kushomeka kwemasumbu.
Kunyangwe iwe uchida Anavar evarume kana Anavar kuvakadzi for uremu kuwana nguva panguva off-mwaka, iwe uchazonyatsoda metabolic inowedzera maitiro eOxandrolone. Iwe unozoona kuti zvinokuita kuti uwane hushoma huwandu hwemafuta e-off-nguva yemuviri zvichienzaniswa kana iwe uchinge uchishandisa mamwe ma-steroid akasimba.
Anavar evarume kana Anavar evakadzi anogona kunge ari anobatsira zvakanyanya kukuwedzera iwe panguva yekucheka chikamu. Mushonga wacho ndewezvisimba zvakanyanya ane anabolic. Saka nekudaro, inoshanda kwazvo mukuchengetwa kwematehwe kana mumwe achidya.
Paunenge uchida kudurura mafuta emuviri, yako calorie yekudya inofanirwa kunge yakadzikira pane huwandu hwemakorori aunopisa kuti uwane chaihwo hunowedzerwe kugadziriswa kwematehwe. Zvakangodaro, zvisinei nekukosha kwezvibodzwa zvako mukudya kwako, iwe ucharasikirwa nemimwe tsandanyama kana muviri wako uchishayiwa ane simba yakasimba anabolic mumiriri. Kufunga nezvayo yakasimba anabolic zvivakwa, ndipo panouya Anavar mune zvinobatsira.
Paunoshandisa Anavar panguva yekucheka chikamu, muviri wako unokwanisa kupisa mafuta zvakanyanya. Pakupedzisira, iwe unozoona vascularity yakagadziriswa uye iwe unozotaridzika kuva wakasimba uye zvakanyanya kutsanangurwa. Ndokusaka varume vazhinji vachisarudza Anavar for uremu.
Anavar isarudzo yakasarudzika yemasidiki yevatambi nekuda kwesimba rayo rekuwedzera simba-rekuwedzera. Nekudaro, mhedzisiro yayo mune izvi haina kutaurwa seiya yemamwe ma-steroid akadai saHalotestin kana Dianabol.
Simba remumhanyi rinomhanyisa kumhanya uye simba rake, izvo zviri zviviri zvine simba pakubata kwake. Kusimba kwemumhanyi, kuri nani kuita kwavo.
Kunze kwesimba, vatambi vanofanirwa kunge vakareruka saka, havadi masimandi makuru anovaka. Nekuti its inosimbisa munhu pasina chaicho kuwedzera muswe yavo kuvaka-up, Anavar anova akakodzera mumhanyi enhancer. Zvirinani, hazvitungamiri kukuchengetwa kwemvura, izvo zvingave zvichitadzisa mutambi kuita basa.
Kunyangwe iwe uchishandisa Anavar kurasa mamwe mafuta kana kuvandudza chiitiko chako chemitambi, iwe unozoona kuti kana iwe uchinge watora mushonga sekurairwa, yako yekudzora inowedzera zvakanyanya. Kunze kwezvo, inowedzera kwako kutsungirira.
Nekuda kweizvozvo, iwe unozotora nguva yakareba usati waneta kana uchiita zviitwa zvemuviri, nekudaro kugona kusundira zvakanyanya uye kuwedzera kuwanda. Izvi zvinobatsira iwe kuti ubatsirwe zvakanyanya kubva kumisangano yako yekurovedza muviri.
Heano mamwe eanowanzoitika mhedzisiro yehuwandu hwevakakurumbira ma-steroid. Ngatione kana oxandrolone mhedzisiro ine chero chekuita navo.
Kusiyana nemamwe steroid se Trenbolone iyo aromatize, nekudaro ichikonzera gynecomastia, iyo mahormoni inopihwa naOxandrolone haina kukonzera chero chimiro cheesrogenic side athari. Izvi zvinodaro nekuti hazvikonzerezi kuchengetwa kwemvura izvo zvingaite kuti estrogen nhanho dzisimuke. Imvura-inochengeterwa-isina midziyo inoita kuti mushandisi asanyanyo pererwa neropa rakakwira.
Iko kusatarisirwa kweOxandrolone yekukonzera estrogenic mhedzisiro kunokonzerwawo nenyaya yekuti haina kubereka chero chiitiko chakabatana neprogestin.
Kunyangwe Oxandrolone isiri androgenic yakawanda, inounza zvishoma androgenic basa. Nekuda kweizvozvo, vanhu vanozvishandisa vanokwanisa kugadzira acne uye avo vanonyanya kutapukira kumarume maitiro emhanza vanogona kusangana zvakanyanya nekurasikirwa kwebvudzi zvichitevera kushandiswa kweiyo steroid.
Anavar yevakadzi inogona kuburitsa androgenic mhedzisiro inogona kusimudzira virilization zviratidzo zvakadai sekukura kwebvudzi remuviri, kwakadzika izwi chords uye kwakakura clitoris mune vakadzi. Nekudaro, zviratidzo zvinogona kudzivirirwa nekutora iwo iwo chaiwo Anavar dosage.
Kana iwe uri mukadzi uye iwe uchinge uchinge uchiona zviratidzo zveVililization, iwe unoyambirwa kuti umise kushandisa mushonga ipapo nekukurumidza. Mushure mekuita izvo, zviratidzo zvinofanirwa kunyangarika. Zvikasadaro, zviratidzo zvinogona kuzova chikamu chako kana ukazvifuratira uye woramba uine iyo steroid.
Zvakangodaro, ruzhinji rwevashandisi veasididid haawone androgenic mhedzisiro nekuti yakazara androgenic chimiro chakaderera.
Kusiyana nemamwe anabolic steroid ayo anoda kushandiswa pamwe ne5-alpha reductase inhibitors yekupedzisira kudzivirira angangodaro androgenic mhedzisiro, Anavar akachengeteka uye akapfava kunyangwe pasina zvinodzivirira. Izvi zvinodaro nekuti 5-alpha reductase enzyme inorehwa kuderedza testosterone kune dihydrotestosterone, asi sezvo Oxandrolone yatova dihydrotestosterone, haidi iyo enzyme.
Imwe yematambudziko akakomba oxandrolone ndeimwe chinhu chekuita necholesterol. Hembe yeOxandrolone inodzvinyirira cholesterol yeHDL kusvika ku50% ichisimudzira LDL cholesterol mazinga kusvika ku30%.
Nekuda kwekuchinja uku cholesterol, vanhu vane cholesterol nyaya vanorayirwa kuti varege kuzowedzera vachishandisa oxandrolone. Zvikasadaro, izvo zvine hutano hwakakwana zvekushandiswa kwayo zvinokurudzirwa kuchengetedza hupenyu hune hutano nekudya cholesterol- inoshamisika yekudya ine huwandu hwakawanda hwemafuta acids uye kuita yakawanda yemwoyo basa.
Kana uchishandisa mushonga uyu, zvinokurudzirwawo kuti uteme pane mafuta akazara pamwe neshuga yakapusa. Iwe unogona kuisa cholesterol antioxidant supplement kuti uchengetedze huwandu hwavo.
Chero ipi neipi steroid iwe yaunotora, kusanganisira Anavar, inotsigira iyo yakasikwa kugadzirwa kwe testosterone mumuviri wako. Kunyange zvakadaro, iyo yekudzvinyirira mwero inosiyana kubva kune steroid kune imwe. Kana tichienzaniswa nemamwe ma-steroid parizvino ari kutengeswa, Anavar ine imwe yemhando nyoro nyoro yekumanikidza. Iyo inodzvanya yakazara seramu mazinga neinenge hafu.
Zvakangodaro, nyangwe hazvo Anvar yemusikirwo testosterone kugadzirwa kwekudzvinyirira maitiro kuri kushoma, varume vanokurudzirwa kuita exo native testosterone chikamu chezvinhu zvavo zvekuwedzera. Kana zvisina kudaro, oxandrolone hormone inogona kukonzera yakaderera- testosterone-ine hukama, pakati pezvimwe zvinogona kunetsa zviratidzo.
Nekudaro, vamwe varume havawone chero testosterone-inoenderana nenyaya semhedzisiro yekushandisa Anavar kunyangwe mazinga avo ekugadzira testosterone aderedzwa ne50% neiyo steroid. Izvi zvinoenderana nemurume testosterone yemusikirwo kunyange. Kunyange zvakadaro, varume vazhinji vachazoda exo native testosterone kurapa kudzikisa zviratidzo zvinokwanisika nekuda kwekushandiswa kweiyo steroid.
Neraki, sezvakangoita chero imwe anabolic steroid, iyo yakashata testosterone migumisiro yeAnavar inotanga kupera simba kamwechete kana munhu arega kuitora. Asi kupora kuzere kunotora nguva kuti kuitike uye iyo post post kurapwa (PCT) chirongwa chinokurudzirwa pane iyo steroid nzira yekurapa yakwana. PCT inomhanyisa maitiro ekugadzirisa.
Anavar ndeye C17-aa Anabolic steroid uye nekudaro, inogona kutungamira mukukuvara kwechiropa, asi zvisiri zvakananga. Kuenderera mberi kushandiswa kweiyo steroid kunogona kukonzera kuwedzera kwakasimba kwechiropa enzyme values. Iyo yakawedzera chiropa enzyme inosimbisa chiropa, ichiwedzera njodzi yekukuvara kwayo.
Saka, nekuda kwehutano hwechiropa chako, zvakakosha kudzivirira kushandisa chero C17-aa anabolic steroid, kusanganisira Anavar kana iwe uine chero dambudziko rechiropa. Zvakare, usatore doro rakawandisa paunenge uchiwedzeredza neC17-aa anabolic steroid yakadai saAnavar kudzivirira kukurwisa chiropa chako.
Yechiropa detoxifier muchirongwa chako chekuwedzera iwe uchishandisa Oxandrolone ichaenda nzira refu yekuchengetedza hutano hwako hwechiropa. Uye sezvo kushandiswa kwakawandisa kweiyo steroid kunogona kukonzera kukuvara kwechiropa, zvakakosha kuti iwe udzikise Anavar yekuwedzera nguva kusvika kuhuwandu hwevhiki dze8.
Kunyangwe Oxandrolone yakakodzera kune vanhurume, kutenderera kwaAnavar kwakapfava pane vanhurume zvekuti ruzhinji rwevanoshandisa varume vanoona zvisingaite kune avo vanokura zvavanoda, kunyanya panguva yekusakwana-kana yekukura nguva. Nekudaro, ivo vachiri kuisa pairi nekuda kwekuchengetedza kwayo tsandanyama, inova imwe yezvinangwa zvikuru kune vazhinji vevashandisi. Zvirinani, mushonga uyu unogadzirisa maitiro emunhu metabolic.
Kutenderera kweAnavar kuvakadzi
Nepo Oxandrolone mahormoni isiri yekuwedzera simba, hazvishamisi kuti mushandisi wechikadzi asangane ne100% yekuonda tishu yemafuta pamusoro pekuishandisa. Nekudaro, uye nenyaya yekuti iyi inonyatsoshivirira-inobvumirwa steroid uye inoenda-yekusarudzira vakadzi vemitambo vane hunyanzvi hwekuita basa.
Vakadzi Oxandrolone vanoshandisa avo vari mukudya uye zvikamu zvekukura vanobatsirwa zvakanyanya nemushonga nekuti inotsigira huwandu hwakawanda hwezvinhu zvemuviri zvinosanganisira kuvaka muviri, chiumbwa uye chakaonda bikini muviri.
A standard Anavar kutenderera kwevakadzi kazhinji ari mu10mg kune 20mg yemushonga pazuva uye kazhinji inowanzoitika mumavhiki matanhatu akaputika. Kunyangwe mamwe madhisheni achidarika 20mg, iyo yakawandisa haina kudiwa uye inogona kukonzera oxandrolone mativi.
Kana iwe uri mukadzi uye uchida kushandisa iyo steroid kweanopfuura mavhiki matanhatu, zvinokurudzirwa kuti utange uye kuita ne 3 kune 4 vhiki yevhiki usati watanga kosi ye6-vhiki.
Kutenderera kweAnavar kwevarume
Ruzhinji rwevashandisi vechirume vanoshandisa Anavar yekudzikira uremu kunyanya kana vari kuita yekucheka / yekudyisa chikamu. Ivo vanowana 50mg yemushonga pazuva seyakakodzera kutanga Anavar dosage. Nekudaro, iwe sechirume, unogona kushandisa kusvika ku80mg pazuva sezviri mukati meganho iro, mushonga uyu wakachengeteka kumuviri wako.
Kufunga Oxandrolone mutengo iri angangoita $ 2 por ye 10mg tab, Anavar kutenderera kwevanhurume kunogona kudhura zvakanyanya.
Iyo chaiyo Anavar dosi inosiyana inoumba munhu mumwe kune mumwe; zvinoenderana nehurume hwake pamwe nezvinangwa zvake zvakazvimirira.
Kazhinji, mukadzi achazoda yakaderera Oxandrolone dosage pane murume kuti awane mhedzisiro / zvibodzwa zvakafanana. Kazhinji, iyo yekucheka Anavar kutenderera kwemukadzi iri muhuwandu hwe10mg zuva nezuva. Nekudaro, iyo zuva nezuva dhigirii inogona kuenda yakakwira se20mg uye kunyangwe ichikonzera mhedzisiro inodiwa, yakakwira dhi yakakwira yeiyo steroid inogona kuita kuti mukadzi agadzire zviratidzo zvehutachiona.
Mujaho wechirume anofarira kutsamira kunze kutanga kweAnavar ye 80mg pazuva ichave yakakodzera kwazvo. Zvakangodaro, diki diki inogona kugamuchirwa asi haifanire kunge iri pasi pe30mg, zvikasadaro haizoshanda zvinogutsa.
Maererano nekutsvaga uye kwakasiyana-siyana Anavar Reddit wongororo, chiyero chakajairwa che Anavar kuvarume ari 50mg pazuva.
Maitiro ekuzunza Oxandrolone
Powder: pa 1 gramu yeOxandrolone
Yakanyanya kusangana yakagadzirwa: 20 mg / ml
1 gramu yeOxandrolone poda
1 beaker iyo yakakodzera kugadzirisa huwandu hwezvinwiwa
8 ml ye PEG 300
2 ml ye190 Proof yeGrain Doro
Kupi kwekutenga Oxandrolone
Iyo chete nzvimbo kwaunogona kutenga zviri pamutemo uye zvemhando yepamusoro Anavar anobva kune ane rezinesi uye anotaridzwa zviri pamutemo mutengesi. Pachinyorwa ichocho, AASraw ndiyo nzvimbo yakanakisa yekuwana chigadzirwa.
MUTSVENE unobata nehukuru-hukuru synthesis uye kugadzirwa kweOxandrolone uye saka isu tinokwanisa kukupa iwe chero huwandu hwe Anavar for sale kana kupedzisa kushandiswa chero bedzi iwe uchizadzisa zvinodiwa. Isu tinoshanda pasi peCGMP uye yedu trackable yemhando yekudzora sisitimu inotibatsira kushanda mukati meyakaganhurirwa yemitemo yakakodzera nemirau kuona kuti tinopa zvigadzirwa zvepamusoro-soro.
Tsananguro yeMeta: Oxandrolone (Anavar) inogadzirwa androgen uye anabolic steroid (AAS) zvinodhaka inozivikanwa kwazvo nekuda kwesimba rayo uye simba-rinowedzera masimba. Iyo iri pakati peinonyanyozivikanwa uye inoshandiswa pamuromo anabolic steroid. Oxandrolone yakachengeteka kuti ishandiswe nevarume nevakadzi kana iyo chaiyo dosage yakanamatira.
Kudzvinyirira RH, DeSanti L: Oxandrolone yakanyengerera lean Mass kuwana panguva yekudzora kubva mukutsva kwakasimba kunochengetwa mushure mekurasikirwa kweanabolic steroid. Pisa. 2003 Dec; 29 (8): 793-7. [PMID: 14636753]
John Cabaj, "Maitiro ekufananidza oxandrolone." US Patent US20030032817, yakaburitswa Kukadzi 13, 2003
Karim, A., Ranney, RE, Zagarella, J., & Maibach, HI (1973). Oxandrolone maitiro uye metabolism mumunhu. Clinical Pharmacology & Therapeutics, 14 (5), 862-869.
Raiti, S., Trias, E., Levitsky, L., & Grossman, MS (1973). Oxandrolone uye kukura kwevanhu mahormone: kuenzanisa kwekukura-kunokonzeresa mhedzisiro muvana vadiki. American Nhoroondo yezvirwere zvevana, 126 (5), 597-600.
Rosenbloom, AL, & Frias, JL (1973). Oxandrolone yekusimudzira kukura muTurner syndrome. American Zvinyorwa zveHosha dzevana, 125 (3), 385-387.
Strauss, RH, Liggett, MT, & Lanese, RR (1985). Anabolic steroid inoshandisa uye inoonekwa mhedzisiro mune gumi uremu-vakarovedzwa vakadzi vatambi. Jama, 253 (19), 2871-2873.
Nzira Yokusarudza Steroid Powder Suppliers mu12 Matanho
Yakazara Yekutenga Nhungamiro YeSARM SR9009 Kuvaka muviri Flibanserin Inobatsira Sei Mukadzi seHormone Yezvepabonde